Iifilitha ze-Aquarium: iimodeli ezilungileyo, iintlobo kunye nolondolozo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ihlaziywe 15/07/2021 14:39 | Izixhobo, Intlanzi
Ukugcina umgangatho wee-aquariums zethu kunye nokuseka iimeko ezifanelekileyo zokuphuhliswa okufanelekileyo kunye nokugcinwa kweentlanzi zethu, kufuneka sibe nesihluzi esifanelekileyo se-aquarium. Inkqubo ye- Iifilitha ze-aquarium Ziyimfuneko ukuze zikwazi ukonyusa ioksijini emanzini kwaye zinciphise nongcoliseko lwe-aquarium ngentsalela efumanekayo.
Kweli nqaku siza kudwelisa olona luhlu lungcono lwee-aquariums, iimpawu zazo kunye nokuba loluphi uhlobo lokucoca ulwandle olufanelekileyo olunokuba nalo ngokunxulumene nexabiso lemali.
1 Iifilitha ezilungileyo ze-aquariums
1.1 Iifilitha zeHygger aquarium
1.2 IREENUO yangaphakathi Impompo yokuCoca i-Aquarium
1.3 Ipompo engena 500L / H 6W ethe cwaka
1.4 Inkqubo yokuHluza ye-AquaClear 20
2 Zenzelwe ntoni izihluzo ze-aquarium?
3 Ungazikhetha njani iifilitha ze-aquarium
4 Iindidi zeefilitha zasemanzini
5 Ukugcina isihluzi
6 Kufuneka siyitshintshe kangaphi?
Iifilitha ezilungileyo ze-aquariums
SHUNTING Isihluzi se... Bona amanqaku Jonga umnikelo
ICargo Cargo Slim Bio ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
ICA OP200 Optimius 200 -... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Isihluzo se-flintronic... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphakathi U2, ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	SHUNTING Isihluzi se...
Umgangatho wexabiso	ICargo Cargo Slim Bio ...
Oyintandokazi yethu	ICA OP200 Optimius 200 -...
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphakathi U2, ...
Iifilitha zeHygger aquarium
izihluzi ze-hygger ze ...
Luhlobo lwangaphakathi lokucoca ulwelo lwe-aquarium olunakho Hluza phakathi kweelitha ezisibhozo ukuya kwezingama-8 zamanzi ngeyure. Inempompo yamanzi yetanki leentlanzi elikwaziyo ukumpompa malunga neelitha ezingama-420 ngeyure nganye kuba inamandla ayi-7W. Ikwanesiponji kunye nekhabhoni esebenzayo yokuphucula ukucoca izinto eziphilayo ezinokuba semanzini. Inebhari yokutshiza. Ukuba ufuna ukuthenga esi sihluzo ungacofa apha.
IREENUO yangaphakathi Impompo yokuCoca i-Aquarium
Isihluzi sempompo se-IREENUO ...
Le modeli inempompo ye-aquarium ye-4-in-1. Impompo yamanzi iyangena kwaye inemisebenzi emininzi. Oko kukuthi, inokusetyenziswa njengecebo lokucoca amanzi, ukuhambisa impompo yamanzi eoksijini kunye nokwenziwa kwamaza. Isetyenziselwa inani elikhulu leentlobo ze-aquariums, phakathi kwazo kukho amatanki okuzalisa kunye nokugcinwa kwemithombo emincinci yamanzi.
Ineswitshi ecaleni kwempompo yomoya esinceda ukuba sihlengahlengise isantya esifuna ukuhamba kwamanzi. Unikezelo lweoksijini lunevevu enceda ukulawula ukuhamba komoya ngaphakathi nangaphandle. Impompo iyakwazi ukuhluza isixa esikhulu samanzi kwaye inokuvelisa amaza anamandla alinganisa ngcono imeko yendalo yentlanzi. Ukukwazi ukuthumela amanzi ukuya kuthi ga kwi-1.6 yeemitha kwenza ukuba indawo ye-aquarium ibenomtsalane ngakumbi, ibonakala yendalo ngakumbi.
Luhlobo lokucoca ulwelo lwe-aquarium ekulula kakhulu ukuba luhlangane kwaye lucoceke, ke akufuneki ukuba sikhathazeke kakhulu malunga nolondolozo. Imoto yomelele kwaye ithule. Ukuba ufuna ukufumana icebo lokucoca ulwelo ngolu hlobo, cofa apha.
Ipompo engena 500L / H 6W ethe cwaka
Ubushushu Pump 500L / H ...
Le mpompo yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye ibonisa isheft enzima-yodongwe. Imoto yenziwe ngobhedu olusulungekileyo, olwenza ukuba lube yinto eqinileyo kunye neyochayo. Siyabulela oku, sinokupompa amanzi, ioksijini, ihluziwe kunye nemisebenzi yamaza ixesha elide.
Uncedo lolu luyilo kukuba kukuthula okungathethekiyo. Ineekomityi ezi-4 zokutsala ezomeleleyo ezenzayo vimba ingxolo ngokukhupha i-fuselage. Ukuhamba kwamanzi kuhlengahlengiswa kwaye kunendawo ezininzi zokuhambisa amanzi. Ukugcinwa ngokulula, yimpompo elula ukudibanisa kunye nokucoca. Ngale ndlela, akufuneki sizikhathaze kakhulu ngayo. Kwaye iza kudityaniswa nendawo enkulu yekhabhoniyokhemikhali kunye nesicoci sekhabhoni esisebenzayo. Oku kuvumela indawo ecocekileyo yamanzi ukuba igcinwe kwi-aquarium.
Ukuhamba okuphezulu ziilitha ezingama-500 ngeyure. Isetyenziselwa iitanki zentlanzi, amachibi, iigadi zamatye, iigadi zamanzi, iinkqubo ze-hydroponic, iigadi zokunkcenkceshela kunye neendawo zasemanzini, phakathi kwabanye. Ayilungelanga kuphela ukusetyenziswa phantsi kwamanzi, kodwa nangaphantsi komhlaba. Ukuba ufuna ukuthenga enye yezi modeli, cofa apha.
Inkqubo yokuHluza ye-AquaClear 20
I-AquaClear A595 ...
Imodeli ye-aquarium inenkqubo yokuhluza esebenzisa amandla apheleleyo embindi. Isinceda ukugcina wonke umthamo wamanzi agqitha kwisihluzi sicocekile ngezinto eziphilayo. Yenzelwe ukwandisa ukusebenza kokucoca. Kulula ukugcina ukutshintshiselana ngamalungu ngelixa ukhuthaza ukubuyiswa kwamanzi. Imodeli efikelelekayo ngokwamaxabiso, ungayithenga ngokuchofoza apha.
Zenzelwe ntoni izihluzo ze-aquarium?
Isihluzi se-aquarium yinto ebalulekileyo yokugcina imeko entle yamanzi kunye nempilo yentlanzi. Inoxanduva lokuphinda ujikeleze amanzi etankini kunye amacebo okucoca ulwelo anokuba yityhefu. Ezi zinto zekhemikhali ziqokelelana ngokuhamba kwexesha ngenxa yomsebenzi wentlanzi kunye nezityalo, ukuba sinazo.
Iyasebenza ukugcina amasuntswana aqinileyo njengezicucu zezityalo okanye inkunkuma kwaye ikhutshwe kumacandelo afana namayeza kunye nokutya kwentlanzi. Isebenza njengenkqubo yendalo, njengomlambo okanye ichibi. Inkunkuma yebhayoloji ayinakuqokelelwa kwinqanaba eliyingozi lezityalo nezilwanyana.
Ungazikhetha njani iifilitha ze-aquarium
Ukukhetha isihluzo se-aquarium esifanelana neempawu zethu kunye neemfuno zethu kufuneka siqwalasele le miba ilandelayo:
Ukuhamba komsebenzi kwimpompo.
Isihluzo sangaphakathi se-aquarium sokuqulatha izinto zokucoca ulwelo. Oku kuxhomekeke kubungakanani benkunkuma egcinwe kwi-aquarium yethu. Kuyaxhomekeka nakwiindidi zeentlanzi esinazo.
Ukuhamba kwamanzi kunye nomyinge wevolumu.
Ukuba bhetyebhetye xa kuqwalaselwa umaleko wokucoca ulwelo. Oku kubalulekile kuba amaxesha amaninzi sinomdla wokukhetha isixa semicimbi esihluziweyo kunye nendlela eya kwenziwa ngayo ngaphakathi kwesihluzi. Oko kukuthi, kukho izinto ezibaluleke ngakumbi ekucoceni kunezinye kuba zinokuba yityhefu ngaphakathi kwi-aquarium.
Iindidi zeefilitha zasemanzini
Kukho amaziko ahlukeneyo e-aquarium ngokuxhomekeke kwimfuno yempawu zawo. Sinokubona oku kulandelayo:
Iifilitha zangaphakathi ze-aquarium. Enye yeemodeli ezixhaphakileyo kwihlabathi le-aquarium. Isetyenziselwa ii-aquariums apho kukho izityalo, ii-aquariums zaselwandle, kunye neentlanzi zokuzalela.
Iifilitha zesiponji. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zolu hlobo. Amaziko esiponji asetyenziselwa ikakhulu ukugcina iiprnns, i-fry okanye i-killifish. Ngenye yezona zilula ukuya kwinqanaba
Isihluzi sebhokisi okanye isihluzo sekona. Yinkqubo esisiseko enakho ukuqulatha iintlobo ezininzi zezinto zokucoca ulwelo Ilungele ii-aquariums ezincinci ezifuna ukuhluza ngobumnene ngoku kungokuncinci.
Icebo lokucoca ulwelo: yenye yemodeli yokuhluza ngaphakathi kodwa ayixhaphakanga. Kuyacetyiswa kwezo aquariums zinezityalo zendalo kwaye zibekwe phantsi kwe-substrate. Enye yeengxaki abanazo kukuba iingcambu zezityalo zinokuziwisa ukuba zinzulu.
Iifilitha zangaphandle: zibekwe ngaphandle komchamo. Enye yeenzuzo eziphambili kukuba kuthatha indawo ngaphakathi kwi-aquarium, eyinzuzo ngeendlela ezininzi.
Icebo lokucoca ulwelo lwengxangxasi okanye isihluzo sobhaka: Luhluzo lwangaphandle oluxhomekeke kolunye lweendonga ze-urn. Inoxanduva lokungenisa umphezulu wamanzi kakuhle kwaye ivumela ukubandakanywa kwezinto ezahlukeneyo zokucoca ulwelo.
Ukugcina isihluzi kufuneka yenziwe rhoqo rhoqo kwiintsuku ezili-15. Ukuba i-aquarium inkulu kwaye sinaso isihluzo sangaphandle, ukucocwa kwaso kunokwenziwa kube kanye ngenyanga. Ukwenza ulondolozo senza oku kulandelayo:
Sahlulahlula indawo yeinjini kwindawo enesiponji kunye nezinye izinto zokucoca.
Sisebenzisa iemele yamanzi ukucoca iziponji.
Ngamanzi e-aquarium sicoca isiponji.
Sicacisa izinto zecoci.
Sibeka yonke into njengoko yayiqala.
Kufuneka siyitshintshe kangaphi?
Amaziko aya esiba mandundu ngokuhamba kwexesha. Esinye sezalathi eziza kusenza sibone ukuba kufuneka sitshintshe isihluzi okanye hayi ukunciphisa amandla ayo okucoca amanzi. Ukuba sibona ukuba amanzi awacocwanga kakuhle, kungenxa yokuba isihluzo siya kuba neenxalenye ezigugileyo. Singaqinisekisa kwakhona xa siqhubeka nokucoca.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neefilitha zasemanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Iifilitha ze-Aquarium